शुक्रबार थप ८ सय २३ जनाले कोरोनासँग जित, संक्रमितको संख्या १५ हजार नाघ्यो — onlinedabali.com
शुक्रबार थप ८ सय २३ जनाले कोरोनासँग जित, संक्रमितको संख्या १५ हजार नाघ्यो
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८ सय २३ जनाले कोरोनासँग जितेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभन्न अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टरबाट उनीहरुले कोरोनामुक्त भएर घर फर्केका हुन् ।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदै गर्दा निको हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । अहिलेसम्म कोरोना जितेर घर फर्किनेहरुको संख्या ६ हजार नाघेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार कोरोना निको भएर घर फर्किनेको संख्या ६ हजार १४३ पुगेको छ ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार शुक्रबार थप ७ सय ४० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभरका प्रयोगशालामा ४ हजार ४८३ नमुना परीक्षण गर्दा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्यामा संक्रमित भेटिएको हुन् । योसँगै देशभर संक्रमितको संख्या १५ हजार २ सय ५९ पुगेको छ ।
आज सबैभन्दा धेरै अछाममा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । प्रवक्ता डा. गौतमले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा अछामका २ सय ३० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कैलालीका ५८ जना, बाजुराका ५३, डोटीका ४७, कञ्चनपुरका ४५, बैतडीका ४०, रौतहटका २९, डडेलधुरा र झापाका २८–२८ जना, सिराहाका २४, नवलपुरका १९, धनुषाका १६, बझाङका १४, दैलेखका १२ र बर्दियाका १० जामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै नवलपरासी, दाङ र तनहुँका ९–९ जनन, सप्तरी, कपिलवस्तु, सल्यान ८–८ जना सुर्खेत र महोत्तरीका ६–६ जना, उदयपुर र मोरङका ५–५ जना, पर्वतका ३ तथा कास्की र पर्साका २–२ जना, चितवन, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा, कालीकोट, रोल्पा र बाग्लुङका एक–एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।